မိုးရွာထဲ မှာ ရေစိုနေ တဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှကို ပြသ လိုက်တဲ့ “ရှင်ယွန်းမြတ်” – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မိုးရွာထဲ မှာ ရေစိုနေ တဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှကို ပြသ လိုက်တဲ့ “ရှင်ယွန်းမြတ်”
မိုးရွာထဲ မှာ ရေစိုနေ တဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှကို ပြသ လိုက်တဲ့ “ရှင်ယွန်းမြတ်”
မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကို ရယူ ပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ မိုးရေထဲက အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေးတွေတိုင်းမှာ ရှင်ယွန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေတွက် ရှမိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်….. မေမေ လာရင် နို့စို့မယ်…. ဖေဖေ လာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ်…. မိုးရေထဲမှာ ထွက်ဆော့ရတာကို ကြိုက်တယ်.. ဆိုတဲ့သူလေးပါ
Previous post ရင်သပ် ရှုမောစရာ တင်းရင်ကိတ်လွန်းနေ တဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှကို ပြသလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
Next post ဗီဒီယိုင် ဖိုင်ဟောင်း တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုံကြီးမချဲ့ကြဖို့ ပြတ်ပြတ် သားသား ပြောလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ